Atemmufo 7 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
7 Afei Yerubaal+ a wɔsan frɛ no Gideon+ ne nkurɔfo a wɔka ne ho nyinaa sɔree ntɛm, na wɔkɔbɔɔ nsra wɔ Harod abura ho. Saa bere yi na Midianfo dɔm nso wɔ n’atifi fam wɔ More koko ho, asasetaw no so. 2 Na Yehowa ka kyerɛɛ Gideon sɛ: “Nnipa a wɔka wo ho no dɔɔso dodo sɛ mede Midian bɛhyɛ wɔn nsa.+ Anhwɛ a Israel bɛhoahoa ne ho+ aka akyerɛ me sɛ ‘M’ankasa me nsa na egyee me.’+ 3 Afei frɛ nnipa no na bisa wɔn sɛ, ‘Hena na osuro na ne koma atu? Ɔnsan.’”+ Enti Gideon sɔɔ wɔn hwɛe. Ɛbaa saa no, nnipa mpem aduonu abien san wɔn akyi ma ɛkaa nnipa mpem du. 4 Nanso Yehowa san ka kyerɛɛ Gideon sɛ: “Nnipa a wɔaka yi mpo dɔɔso.+ Ma wɔnkɔ asu no ho na mensɔ wɔn nhwɛ wɔ hɔ mma wo. Afei sɛ meka kyerɛ wo sɛ, ‘Oyi ne wo bɛkɔ’ a, ɔno na ɔne wo bɛkɔ. Na sɛ meka kyerɛ wo sɛ ‘Oyi ne wo renkɔ’ a, ɔrenkɔ.” 5 Ɛnna ɔde nnipa no kɔɔ asu no ho.+ Afei Yehowa ka kyerɛɛ Gideon sɛ: “Obiara a ɔbɛtaforo nsu sɛnea ɔkraman taforo nsu no, ma onnyina nkyɛn. Na obiara a obebu nkotodwe anom nsu no nso, yɛ no saa ara.”+ 6 Mmarima a wɔtaforoo nsu wɔ wɔn nsam no ano si ahasa. Na wɔn a wɔaka nyinaa buu nkotodwe nom nsu no. 7 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Gideon sɛ: “Mmarima ahasa a wɔnom nsu wɔ wɔn nsam yi so na menam begye mo, na mede Midian bɛhyɛ mo nsa.+ Ma nnipa a wɔaka no nyinaa nsan nkɔ wɔn afie.” 8 Enti wogyee nnipa no nsam nneɛma ne wɔn mmɛn,+ na ɔmaa Israel mmarima no nyinaa kɔɔ wɔn afie. Na mmarima ahasa no de, ɔma wɔkae. Saa bere yi na Midianfo gu ase hɔ wɔ asasetaw no so.+ 9 Na anadwo+ no, Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɔre sian kɔ asraafo asoɛe hɔ na mede ahyɛ wo nsa.+ 10 Na sɛ wusuro sɛ wobɛkɔ a, fa wo somfo Pura ka wo ho kɔ asoɛe hɔ.+ 11 Tie asɛm a wɔbɛka no,+ na akyiri yi wo nsa bɛyɛ den+ na woakɔ wɔn so wɔ nsraban no mu.” Enti ɔne ne somfo Pura sian kɔɔ nsraban no nkyɛn baabi, faako a asraafo a wɔrewɛn asoɛe hɔ no wɔ no. 12 Ná Midianfo ne Amalekfo ne Apueifo+ nyinaa abesum asasetaw no so mã te sɛ mmoadabi.+ Wɔn yoma+ nni ano; wɔdɔɔso sɛ mpoano anhwea. 13 Bere a Gideon duu hɔ no, ɔtee sɛ ɔbarima bi reka ne dae akyerɛ ne yɔnko. Na ɔkae sɛ: “Mesoo dae bi.+ Na mihui sɛ atoko paanoo kurukuruwa bi redannan ba Midian asoɛe hɔ. Bere a ebeduu ntamadan bi ho no, ɛdan no butuwii,+ na ntamadan no tutu guu hɔ.” 14 Ɛnna ne yɔnko no kae sɛ:+ “Eyi de, ɛnyɛ hwee sɛ Yoas ba Gideon,+ Israelni no, nkrante. Nokware Nyankopɔn+ de Midian ne dɔm no nyinaa ahyɛ ne nsa.”+ 15 Bere a Gideon tee dae no ne ne nkyerɛase no,+ ɔbɔɔ ne mu ase somee.+ Afei ɔsan baa Israelfo asoɛe hɔ, na ɔkae sɛ: “Monsɔre,+ na Yehowa de Midian asraafo asoɛe hɔ ahyɛ mo nsa.” 16 Ɔkyɛɛ mmarima ahasa no mu yɛɛ wɔn akuw abiɛsa. Na ɔde mmɛn+ ne nhina hyehyɛɛ wɔn nyinaa nsam. Ná agyatɛn hyehyɛ nhina no mu. 17 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monhwɛ nea mɛyɛ biara na monyɛ bi. Sɛ midu asoɛe no ano a, biribiara a mɛyɛ no, mo nso monyɛ saa ara. 18 Sɛ me ne wɔn a wɔka me ho no hyɛn mmɛn no a, mo nso monhyɛn mmɛn ntwa asoɛe no ho nhyia,+ na monka sɛ, ‘Yehowa+ ne Gideon dea!’” 19 Afei ɔdasum*+ no, Gideon ne mmarima ɔha a wɔka ne ho no baa asoɛe no ano. Saa bere yi ara na na wɔde awɛmfo akogyinagyina wɔn awɛnee. Na wofii ase hyɛn mmɛn no,+ na wɔbobɔɔ nhina a wokurakura no.+ 20 Na akuw abiɛsa no hyenhyɛn mmɛn+ no na wɔbobɔɔ nhina no. Wɔde agyatɛn no hyɛɛ wɔn nsa benkum mu, na wɔde mmɛn no hyɛɛ wɔn nsa nifa mu hyɛnee, na wɔteɛteɛɛm sɛ: “Yehowa+ nkrante ne Gideon de!” 21 Saa bere yi nyinaa na obiara gyina n’afã atwa asoɛe no ho ahyia. Na dɔm no nyinaa soo mmirika mu de nteɛteɛm guanee.+ 22 Mmarima ahasa+ no kɔɔ so hyɛn wɔn mmɛn+ no. Na Yehowa maa obiara a ɔwɔ asoɛe hɔ de ne nkrante kɔɔ ne yɔnko so,+ na dɔm no guan koduu Bet-Sita wɔ Serera, na wɔkɔe ara koduu Abel-Mehola+ wɔ Tabat ho. 23 Na wɔfrɛfrɛɛ Israel mmarima fii Naftali+ ne Aser+ ne Manase,+ na wotiw+ Midianfo no. 24 Gideon tuu abɔfo kɔɔ Efraim+ bepɔw nyinaa so, na ɔkae sɛ: “Munkodi Midianfo anim nsisiw asu no ano akwan nkosi Bet-Bara ne Yordan.” Enti wɔfrɛɛ Efraim mmarima nyinaa hyiae, na wokosisiw asu+ no ano akwan kosii Bet-Bara ne Yordan. 25 Afei wɔkyeree Midian akunini baanu a wɔn din de Oreb ne Seeb,+ na wokum Oreb wɔ Oreb botan+ so, na wokum Seeb wɔ Seeb nsã-kyi-amoa ho. Wɔkɔɔ so ara tiw Midianfo+ no, na wɔde Oreb ne Seeb ti kɔmaa Gideon wɔ Yordan mpɔtam hɔ.+
^ Nea ɛkyerɛ ne, “ɔwɛn bere a edi mfinimfini.” Efi ase bɛyɛ anadwo nnɔn du kosi ɔdasum nnɔn abien.